.: Ko Moe's Electronics Notes :.: February 2008
ရတနာပုံဈေးက ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေ၊ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေ ရှိနေသေးတဲ့နေရာကြီးပါ။ MICT park, SkyWalk Shopping Mall, MCC (Mdy), Offices, ... တွေရှိတဲ့နေရာပေါ့။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီနေရာမှာ အကြာကြီးနေခဲ့တာပဲ။ သံယောဇဉ်အရမ်းရှိပါတယ်။ အခုမီးလောင်သွားပြီတဲ့။ အရမ်းကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ အားလုံးကိုလည်းသနားတယ်၊ ၀မ်းနည်းတယ်ဗျာ။
Posted by ကိုမိုး at Monday, February 25, 2008 No comments:
LabView နဲ့ DSP Signal Processing ရဲ့နမူနာလေးတည်ဆောက်ပုံပါ။ Program Flow ကတော့ Signal (Sine Wave)ကို Input အဖြစ်လက်ခံတယ် White Noise Signal နဲ့ရောတယ်။ နောက်အဲဒီ Signal ကို FIR filter နဲ့ Filtering ပြန်လုပ်တယ်။ နောက် Signal တွေထုတ်တယ်။ Input Signal ကတော့ Virtual ပေါ့။ DSP သဘောတရားတော့ နည်းနည်းနားလည်မှ ဒီဥပမာကို သိမှာပါ။ Signal Generator, White noise Components တွေက Clone တွေပါ။ ပြင်လို့မရနိုင်ပါဘူး။
Posted by ကိုမိုး at Sunday, February 24, 2008 1 comment:
Labels: DSP, LabVIEW, Programming
Programming With LabVIEW (3) (Creating and Using SubVI)
ဒီ LabVIEW အကြောင်းကို ကျွန်တော်ရပ်ထားခဲ့တာကြာပါပြီ။ LabVIEW က တစ်ခြား Programming Language တွေလိုပဲ Function တွေသုံးလို့ရပါတယ်။ ဒီမှာကျတော့ SubVI လို့ခေါ်ပါတယ်။ သူ့ကိုတည်ဆောက်ရတာ မခက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ချက်နှစ်ချက် လောက်တော့ သိဖို့လိုပါတယ်။
ပထမအဆင့်အနေနဲ့ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ VI ကိုတည်ဆောက်ရပါတယ်။ အဲဒါကပုံမှန် LabVIEW program ရေးတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ အောက်မှာနမူနာအနေနဲ့ Fahrenheit ကနေ Celsius Degree ပြောင်းတဲ့ program လေးကိုပေးထားပါတယ်။
အဲလိုတည်ဆောက်လို့ပြီးသွားတဲ့အခါ အဲဒီ VI ကို SubVI အဖြစ်တစ်ခြား VI မှာထည့်သုံးလို့ရအောင် setting လုပ်ပေးရပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ညာဘက်အပေါ်ဒေါင့်မှာ Icon လေးကို Right click လုပ်လိုက်ရင် Pattern ထဲမှာ အထက်က မှာပါတဲ့ Patterns ကိုရွေးရပါတယ်။ pattern ရွေးတဲ့နေရာမှာ ဘယ်၊ ညာ block နှစ်ခြမ်းရှိတဲ့ထဲက ဘယ်ဘက်က အခြမ်းက Input (Passed Value) ဖြစ်ပြီး၊ ညာဘက်က အခြမ်းက Output (Return) ဖြစ်ပါတယ်။ 1 Input, 1 Output ရှိတဲ့အတွက် တစ်ကွက်စီပဲဖြစ်နေတာပါ။2Inputs ဆိုရင် ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာ ၂ ကွက်ဖြစ်ရပါမယ်။ ပုံမှန်က အဖြူရောင်တွေပါ။ ပြီးရင် Input Control ကိုရွေး ဘယ်ဘက်အကွက်ကို click လုပ်။ Output Indicator ကိုရွေး ညာဘက်အကွက်ကို click လုပ်ရင် အထက်မှာပါတဲ့အတိုင်း လိမ်မော်ရောင်လေးတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။ အရောင်ကိစ္စကတော့ Integer ဆိုရင် အပြာရောင်၊ Float ဆိုရင် လိမ်မော်၊ Character ဆိုရင် အစိမ်း၊ String ဆိုရင် ပန်းရောင်ပါ။ Array ဆိုရင် line ထူပါတယ်။ Data Flow တွေကလည်း အဲဒီအရောင်တွေ အတိုင်းပါပဲ။ ပုံတွေမှာကြည့်လိုက်ပါ။
အဲဒီ SubVI ကိုအခြား VI မှာယူသုံးလိုက်တဲ့ ပုံတွေပါ။ C->F Icon လေးက SubVI ရဲ့ Icon ပါ။ ကျန်တာတွေကတော့ အရင်တစ်ခါရေးခဲ့သလို နေရာချ။ Flow line တွေလိုက်ဆက်ပေး။ ပြီးရင် လို့ရပါပြီ။ နောက်ထပ် Post တွေမှာ Tools, Instruments, Components တွေကိုနဲနဲခြင်းထည့်ပြောသွားပါမယ်။ အဓိကဖြစ်တတ်တဲ့ Error တွေကတော့ မတူတဲ့ Data Type အချင်းချင်း Data Flow ချိတ်မိတာပါပဲ။
Posted by ကိုမိုး at Thursday, February 21, 2008 No comments:
Posted by ကိုမိုး at Tuesday, February 19, 2008 No comments:
TI MSP-430 ရဲ့ ဥမာလေးတွေပါ။ ပျောက်သွားမှာစိုးလို့ တင်ထားတဲ့သဘောပါ။ C Language နဲ့ရေးထားတဲ့ MSP-430 Components (Timer, ADC, WatchDog Timer, Ports) တွေနဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ ဥပမာလေးတွေပါ။
Download : Examples of Texas Instruments (MSP-430)
Posted by ကိုမိုး at Monday, February 18, 2008 1 comment:
KPZ ဆိုတဲ့ညီမလေးရဲ့ (ကျွန်တော့်ထက်ငယ်လိမ့်မယ် ထင်လို့ပါ) ဘလော့ဂ်ကို ဖတ်ပြီးတော့ အကြံရလာလို့ပါ။ ဒီ Software ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ သူက တွေအတွက် အဓိကထုတ်ထားတယ် ဆိုပေမယ့် အခြားလုပ်ငန်းတွေမှာလည်း သုံးပါတယ်။ ဆွဲပုံအဆင့်ဆင့်တွေကို မြန်မာလိုပြန်ရေးရင် အရမ်းရှည်မှာစိုးလို့ Video Tutorial လေးတွေပေးလိုက်တာပါ။ အလွန်ရိုးရှင်းပါတယ်။ Download လုပ်ပြီး ကြည့်ရင်ကို နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က AutoCAD ကိုမတတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် SolidWorks က 3D base Software ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားလို့ လေ့လာပြီး လုပ်ကြည့်ထားတာပါ။ ကျွန်တော့်အလုပ်က Testing Machine Box/ Panel လေးတစ်ခုကို ဆွဲကြည့်ထားတာပါ။ အောက်မှာပေးထားတဲ့ Video Tutorial လေးတွေကို ကြည့်ပြီး လုပ်ကြည့်ထားတာပါ။
Basic - အခြေခံလေးတွေကိုရှင်းပြထားတာပါ နမူနာ လေ့ကျင့်ခန်းလေးတစ်ခုပါပါတယ်။
Interface – SolidWorks Setting လေးတွေကို ရှင်းပြထားတာပါ။
Tangent Arc - အခုံးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေးတွေဆွဲတာပါ။
More on Extrusion - အဆင့်ဆင့် ထုထည်လုပ်ပုံလေးတွေပါ။
Sample hole - Surface တွေပေါ်မှာ အပေါက်ဖောက်တွေဖောက်ပုံကို ရှင်းထားတာပါ။
ဒါပေမယ့် အစိတ်အပိုင်းတွေကို Assembly လုပ်ဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအပိုင်းကို Post တစ်ခုအနေနဲ့ သပ်သပ်တင်ပါ့မယ်။ Mechinical Drawing ရဲ့ အခြေခံတွေကို မသိလို့ Technical Terms လေးတွေ အသုံးအနှုံးလေးတွေမှားနေရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။
Posted by ကိုမိုး at Monday, February 18, 2008 No comments:
Labels: Books, Software, Solidworks
ADC (Analog to Digital Converter) အကြောင်းကို ကျွန်တော် Post တစ်ခါရေးဘူးပါတယ်။ ဒါကအဲဒါရဲ့နောက်ဆက်တွဲပါ။ ADC ကနေပြီးတော့ Data တွေကိုဖတ်တဲ့ ပုံစံပါ။ ဖတ်တဲ့နေရာမှာ အဓိကအနေနဲ့ အဆင့် ၃ ဆင့်ပဲရှိပါတယ်။
၁။ ADC Initialisation
၂။ Send Read Command to ADC
၃။ Read back the Reply Value (Read2bytes)
ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ အသေးစိတ်အဆင့်တွေကို အောက်မှာ Flow Chart နဲ့ပြထားပေးပါတယ်။
သူက MCU နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာ SPI Communication Protocol ကိုသုံးပါတယ်။ Clock နဲ့ Chip Select signal ကို MCU ကနေပေးပါတယ်။ Value ဖတ်တဲ့နေရာမှာ 16 bit ရှိတဲ့အတွက် 8-bit Low/High byte ဆိုပြီးနှစ်ခါပြန်ဖတ်ရပါတယ်။ ပြီးမှ 16-bit value အနေနဲ့ပြန်ပေါင်းပေးပြီး တန်ဖိုးကို ယူရပါတယ်။ ADC ကို Command တွေလှမ်းပေးခြင်းအားဖြင့် အလုပ်လုပ်တာပါ။ Flow Chart မှာ Hexa Command တွေပါထည့်ရေးထားပါတယ်။
Posted by ကိုမိုး at Friday, February 15, 2008 No comments:
Wireless Device တွေကို အသုံးပြုကြတဲ့နေရာတွေ အများကြီးပါ။ Medium တွေလည်းအများကြီးပါ။ ဥပမာ Infra Red, RF (Radio Frequency) တွေပေါ့။ ကျွန်တော်အခုပြောမှာက RF ပါ။ သူမှာ System တွေထပ်ရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ဇယားနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြထားပါတယ်။ ကျွန်တော်က အဲဒီထဲကနေ ZigBee နဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ Devices, IC လေးတွေကို ရေးသွားမှာပါ။
XBee ဆိုတာက RF သုံးလို့ရတဲ့ IC ပါ။ MaxStream Company’s product ပါ။ သူ့ကိုတစ်ခြား MCU တစ်ခုနဲတွဲပြီးသုံးလေ့ရှိပါတယ် အောက်မှာ PIC MCU နဲ့ XBee ချိတ်ဆက်အသုံးပြုထားတဲ့ Daughter Board ပုံကိုပြထားပါတယ်။ Computer နဲ့ဆက်ပြီးသုံးချင်ရင် XBee Demonstration Board ကိုသုံးရင်လည်းရပါတယ်။ COM (Serial) port ကိုသုံးပြီးချိတ်ဆက်ပါတယ်။
XBee daughter board
XBee daughter board (layout)
XBee daughter board attached with PIC MCU
XBee Demonstration Board
Internal Data Flow Diagram
Posted by ကိုမိုး at Thursday, February 14, 2008 No comments:
Labels: DSP, Hardware, Wireless
ဒီ Post ကတော့ နဲနဲမျက်စိလည်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးပါ။ Software တစ်ခုပေါ့ အဲဒါကကျွန်တော့ဆီမှာရှိတဲ့ နောက်ဆုံးဆိုတဲ့ Source Code ကလည်း နောက်ဆုံးဟုတ်မဟုတ် မသေချာတဲ့အခါမှာ Microprocessor ထဲကနေ Hexa Codes ကိုပြန်ယူ။ Assembly Code ပြောင်း နောက် C Code ကိုပြန်ပြောင်း နောက်ပြီး C Code ကိုပြင် ပြီးတော့မှ Microprocessor ထဲကိုပြန်ပြီး Download လုပ်လိုက်ရတဲ့ အခြေအနေပါ။ Hex Code ကိုဖတ်တဲ့နေရာမှာ ဥပမာပြောရရင် 02 04 65 53 က Assembly ဆိုရင် LJMP 0465H ANL ပါ C ဆိုရင် #include “GBA.h”။ တစ်ကယ်တော့ Function Call ပါပဲ။ ဒါပေမယ့်အဲဒါ အသေမဟုတ်ပါဘူး။ Complier Type ပေါ်မူတည်ပြီး Code Conversion ပြောင်းလဲမှုရှိပါတယ်။ နမူနာ Program တစ်ခုကိုအရင်ပြောင်းကြည့်ပြီးမှ တစ်ကယ်ကိုလုပ်မည့် Software ကိုပြောင်းမှ အဆင်ပြေမှာပါ။ မှန်ဖို့ရာခိုင်နှုန်း အလွန်းနည်းပါတယ်။ မရနိုင်ဘူးလို့ပြောတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း မသေချာလို့ တစ်ခြားနည်းပြောင်းသုံးရပါတယ်။
Posted by ကိုမိုး at Wednesday, February 13, 20082comments: